दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण, केछ अवस्था ? — Imandarmedia.com
दिल्लीका स्वास्थ्य मन्त्रीलाई कोरोना संक्रमण, केछ अवस्था ?
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणले यतिबेला बिश्व नै आक्रान्त बनेको छ । बिभिन्न देशका प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरु कोरोना संक्रमित बनेको खबर आइरहेका छन् । यसैबीच छिमेकी मूलुक भारतमा समेत कोरोनाको कहर छ ।
भारतको दिल्ली राज्यका स्वास्थ्यमन्त्री सत्येन्द्र जैनलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। बुधबार दोस्रो पटक गरिएको परीक्षणमा जैनलाई कोरोना पोजेटिभ देखिएको भारतीय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन् । संक्रमण पुष्टि भएसँगै जैन अस्पताल भर्ना भएका छन् । उनलाई राजिव गान्धी अस्पतालमा भर्ना गरिएको बताइएको छ ।
भारतमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या १२ हजार नाघेको छ । एकै दिन ३४१ जनाको मृत्यु भएपछि भारतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ हजार २६२ पुगेको हो । पछिल्लो २४ घण्टामा १३ हजार १०३ जना संक्रमण पुष्टि भएपछि भारतमा संक्रमितको ३ लाख ६७ हजार २६४ पुगेको हो ।
एसियाली मुलुकमा सबैभन्दा बढी कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको भारतमा संक्रमितमध्ये १ लाख ९४ हजार ४३८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि भारतमा मार्च २४ देखिको लकडाउन पाँचौ चरण थप्दै जुन ३० सम्म पुर्‍याइएको छ । तर उक्त लकडाउन जुन १ देखि क्रमिक रूपमा खुकुलो बनाउँदै लगिएको छ ।
साढे ५ महिनादेखि फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ५० हजार नाघेको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका २१३ मुलुक र २ पानीजहाजमा फैलिएको संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या ४ लाख ५० हजार ४५२ पुगेको छ ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै विश्वभर ५ हजार २६४ जनाको मृत्यु भएको छ । एकै दिन १ लाख ४१ हजार २५७ नयाँ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै संक्रमित हुनेको संख्या ८३ लाख ९२ हजार ४८१ पुगेको छ । संक्रमित ३५ लाख ३६ हजार ८७७ जनाको उपचार भइरहेको छ भने ४४ लाख ५ हजार १५२ जना उपचारपछि निको भएका छन् ।
कोरोना भाइरसकै संक्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरुमा विहिबार बिहानसम्म १ लाख ८४ हजार ६५९ जनाको मृत्यु भएको छ । २२ लाख ५२ हजार ४११ जना संक्रमित भएकोमा १२ लाख ४ हजार ३६७ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा १ लाख ४८ हजार ७७९ जनाको मृत्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या २५ लाख ७२ हजार ३३४ पुगेको छ । त्यसमध्ये ११ लाख २९ हजार ८७१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
यस्तै एसियाली मुलुकहरुमा ४४ हजार ५५८ जनाको मृत्यु भएको छ । १७ लाख ३३ हजार १३९ जना संक्रमित भएकोमा १० लाख ८५ हजार २२१ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा ६५ हजार ६८ जनाको मृत्यु भएको छ । १५ लाख ५४ हजार १७९ जना संक्रमित भएकोमा ८ लाख ५१ हजार १४ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरुमा ७ हजार २४९ जनाको ज्यान गएको छ भने २ लाख ७० हजार ६६० संक्रमित छन् । संक्रमितमध्ये १ लाख २५ हजार ५८० जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरुमा १२४ जनाको मृत्यु भएको छ । ८ हजार ९८३ जना संक्रमित भएकोमा ८ हजार ४४८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् ।